Ku dhex kululee biyo karkaraya 5 daqiiqo
Marka hore ku kari dheriga biyo karkaraya ku shub weelka meesha maaskadu ku jirto. Haddii ay tahay baaquli caag ah, biyo karkaraya ayaa lagula talinayaa in la qallajiyo marka hore, ka dibna ku qoo maydho maaskaro. Hadday jiraan POTS ceramic POTS soojeedin inaad ku qubto POTS ceramic. Nadiifi weelka dhoobada ah, ku dhaji maaskaro biyo kuleyl ah 5 daqiiqo.
Maska si tartiib ah ugu xoq saabuun iyo budada dharka lagu dhaqo. Meelaha wasakhda ah si fiican u xoq. Haddii xooggu aad u weyn yahay, dharka maaskarada ayaa dabacsan, oo yareynaya shaqada aan boodhka lahayn. Marka si xoog ah ha u riixin.
Ka dib markii lagu nadiifiyo saabuun, waxaa la gaadhay wakhtigii lagu maydhi lahaa maaskaro. Maska ku mayr maaskarada saabuun, budo dhaq iyo biyo. Sida dharka, u nadiifi nadiif, qorraxda ku dheji, saameyn hawo wanaagsan leh. Waa inay ahaato mid qorraxda ku wanaagsan, kuna dhex jirta, si ay u noqon karto jeermis ka fiican, bakteeriyada.